I-China eyenziwe ngokwezifiso i-Black Fibre Reed Stick ye-Stiffus Amafutha Wesethi kanye Nabahlinzeki | Hoyer
Izinti ze-Reed Reed Reed ze-Fibre ezenziwe ngokwezifiso ze-Diffuser
Izinti ze-Reed diffuser ziqukethe ikakhulu izinti ze-rattan nezikhuhlu zefayibha, zokwenza izinto zefayibhu, ungakhetha cishe noma yimuphi umbala owufunayo, futhi ngeke uvuthwe. Sipakisha ama-120pcs njengesikhwama, esinganela ngokwanele isidingo sakho sasekhaya, ungawasebenzisa ukufaka izinti esikhundleni sendawo yokuhlala, ihhovisi, imakethe, indlu yokugezela, igumbi lokugeza kanye negumbi lokulala, noma ngabe yikuphi lapho uthanda khona.
Ubukhulu: 3 * 250mm
elinye usayizi olutholakalayo: ngokwesidingo sakho
Umbala: mhlophe, mnyama noma ngokwesidingo sakho
I-MOQ: I-50,000pcs, inani elincane liyamukeleka uma sinesitoko
Ubuhle: induku yomhlanga inempilo eyanele ukusetshenziswa kwansuku zonke okungakhipha iphunga lamafutha kancane ukwenza umoya uqhubeke musha. Kuyisipho esihle kakhulu semicimbi eminingi efana nokuzalwa, umshado, ukhisimusi, unyaka omusha kanye ne-houseinng.
Ubukhulu: Ubude 25cm (8 inch), ububanzi 3mm noma 5mm, noma yisiphi isayizi esenziwe ngokwezifiso.
Ukusetshenziswa: Vele faka izinti ezimbalwa ze-rattan noma izinti ze-fiber ebhodleleni le-diffuser, bese uthela amanye amakha noma uwoyela we-diffuser futhi, izinti zizothola uwoyela kancane bese ziletha iphunga emoyeni ngokuhamba kwesikhathi. Akuwona umhlobiso owodwa ekhaya, kungasiza nokuxosha ukunambitheka kwangaphandle nokuvuselela ikhwalithi yomoya.
INKONZO YAMAKHAYA EBONAKALA - Sizonikela ngomsebenzi wethu omuhle kakhulu kumakhasimende ethu, ungathola isiqinisekiso se-100% enkampanini yethu. Uma uthola noma yini engeke ikwanelise, sicela uxhumane nathi futhi sizozama konke okusemandleni ukuyixazulula, ukuyilungisa.
Umbala Mhlophe, mnyama ukuphrinta noma umbala ngokwezifiso nakho kuyamukeleka
MOQ 50pcs Inani elincane liyamukeleka futhi uma sinesitoko
Ukuthunyelwa kokuthunyelwe Ukudweba, i-decal, isikrini se-silika, ukupenda kokufafaza, ukufriza, ukunyathela ngegolide, ukubekwa kwesiliva njll.I-logo eyenziwe ngezifiso, idizayini ye-OEM iyatholakala.
Iphakheji I-Carton, i-pallet noma ngokwesidingo sakho
Isampula a. amasampula esitokweni:QTY: 1-5Izindleko: zinikezwe ngesihle
Isikhathi: izinsuku ezingama-3-5
b. amasampula enziwe ngezifiso:QTY: ngokuya ngesidingo sakho Izindleko: ngokuya ngomklamo othile nomkhiqizo
Isikhathi: ngokuya ngomklamo othize
Intengo Intengo imayelana nesethenjwa sakho, ingashintshwa ngenani noma ngesidingo sakho esithile. Futhi uma udinga izesekeli ezihlobene sicela usibuze, sizokunikeza insiza yethu engcono kakhulu.
IPOD Qingdao / Lianyungang / Shanghai
Esedlule: I-Sola Flower Ekhangayo eyenziwe ngezandla eyenziwe Yamafutha Okugcoba
Olandelayo: Izicucu zeRattan Reed Diffuser Izitayela Zekhwalithi Ehlelekile ngokwezifiso
ibhodlela le-aroma diffuser
ibhodlela le-diffuser emnyama
amabhodlela angenalutho angenamhlanga
I-16oz 500ml Amber Glass Boston Bottle ngeMnyama ...
Ikhwalithi ephezulu yePulasitiki engu-28/410 yeLotion noma ...
I-Sola Flower Ekhangayo eyenziwe ngezandla eyenziwe yoma i-Fo ...
Yenza ngokwezifiso Ubunzima beRattan Reed Diffuser St ...
I-28/410 i-Aluminium cap efanelekayo ye-Glass Diffus ...